Wararka - Weli ma waxaad dooraneysaa muraayadaha wareega wareega iyo muraayadaha laba jibbaaran?
Muraayadaha muraayadaha indhaha ayaa noqotay mid ka mid ah waxyaabaha daruuriga u ah wadada. Wali miyaad doorataa muraayadaha wareega wareega iyo muraayadaha laba jibbaaran?
Markaad ku safreyso wadada, sheyga ilaalinta indhaha waa muraayadaha indhaha. Dhawaan, moodada looxyada aan caadiga ahayn ayaa si aamusnaan ah loogu afuufay warshadaha qalabka. Qaabkan muraayadaha indhuhu si fiican ugama koobnaan karo uun nooc kasta oo lebis ah, laakiin sidoo kale wuxuu kuu oggolaanayaa isugeynta maalinlaha ah ee fudud. Si aan caadi aheyn, waa doorashada ugu fiican ee sawir qaadista waddooyinka si loo muujiyo shaqsiyaddeeda.
Badeecadani waxay isticmaashaa naqshad u samaysan qaab-balanbaalis ah iyo naqshad aan xuduud lahayn oo aan xad lahayn si loogu daro xoogaa nolol maalmeedka caajis ah oo soo jiidata indhaha dadka meel kasta oo ay joogaan.
Xuubka sanka ee silikoonka ayaa yareyn kara cadaadiska sanka, taasoo kaa dhigeysa mid aad ugu raaxeysato inaad xirato Qalabka jirku waa bir, qalabka muraayadaha waa AC. Waxaa jira 7 midab oo muraayaddan ah, oo u dhigmi kara dhar kasta oo aad jeceshahay.
Muraayadaha muraayadaha indhaha ee Sinle muraayadaha indhaha qaabka muraayadaha indhaha muraayadaha indhaha,
2020 NEW Imaatinka Jiilaalka Meegaarka Meegaarka Meelaha Muraayadaha Dibadda Dibedda Farshaxanka Gaarka ah Naqshadeynta GIrls Baby Retro Cat Eye Wear INS Cheap, Naqshadeynta tayada sare leh ee muraayadaha qorraxda Birta Balanbaaliska ah, Nashqadeeyaha naqshadeeye ee qaabeeya haweenka biraha muraayadaha midabka muraayadaha indhaha, Naqshadeynta Weyn ee Balanbaalista Balaaran ee Haweenka 2018 Brand Designer Cat Eye Red Brown Gradient Mirror Muraayadaha Qorraxda, Weyneeya Muraayadaha Muraayadaha Haweenka Madow Madoow Mowjadaha Weyn Qorraxda Ragga Raaxada Brand Vintage Retro Eyewear Oculos.